Barlamaanka Federaalka oo Ansixiyay Labo Sharci oo Muhiim ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Barlamaanka Federaalka oo Ansixiyay Labo Sharci oo Muhiim ah
Sidoo kale, Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ansixiyay heshiiska caalamiga ah ee Dadka Naafada ah kaasi oo Guddiga arrimaha Dibadda ee Golaha shacabka uu Baarlamaanka hor keenay.
Guddoomiye ku-xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Cabdi weli Sheikh Ibraahim Muudeey oo kulanka shirguddoominayay ayaa sheegay in 140-Xildhibaan ay ogolaadeen heshiiskii Baydhabo oo Guddiga Kheyraadka halka 5-Xildhibaan ay ka aamuseen mana jirin Xildhibaano ka aamusay,sidaasina uu ansax ku yahay.
Sidoo kale,Guddoomiye Muudeey ayaa sheegay in heshiiska caalamiga ah ee Dadka Naafada ay ogolaadeen 144-Xildhibaan halka hal Xildhibaan uu ka muusay mana jirin Xildhibaano diiday,sidaasina uu ansax ku yahay.
Dhinaca kale, Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaa kulankoodii maanta loogu qeybiyey Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka ee dhowaan Golaha Wasiirada ansixiyeen, sidoo kale waxaa loo qeybiyey Akhrinta 3-aad ee Hindise Sharciyeedka Batroolka.
Dhanka kale, Wasaaradda Haweenka iyo horumarinta Xuquuqul insaanka Xukuumadda Soomaaliya ayaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya uga mahad celisay ansixinta Heshiiska caalamiga ah ee Xuquuqda dadka Naafada ah.